Iwe uri kuronga kutenga iyo wiricheya yemawoko, ndedzipi mhando dzemibvunzo iwe yaunofanirwa kunge uchibvunza panguva ino? Nhasi ruzhinji rwe wiricheya vagadziri vari kuti chigaro chavo ndicho chakanakisa mumusika. Naizvozvo iwe unofanirwa kufunga nezve akati wandei zvinhu zvakakosha usati wafunga kutenga a wiricheya yemawoko.
Bvunza naChiremba wako
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kubvunza chiremba wako kana mushandi wepabasa kuti uone kuti rudzii wiricheya zvingave zvakanakira mamiriro ako chaiwo.
Chiremba wako achakwanisa kukuudza kana iwe uchifanira kunge uchienda nesimba wiricheya kana wiricheya yemawoko. Mushure meizvozvo, iwe unozokwanisa kusarudza kuti ndechipi cheya cheya chingave chakanakira chako chakatarwa mamiriro.
Zvakawanda Zvakadii A wiricheya Kuyera?
Yechipiri sarudzo chinhu ndeyekuti yakawanda sei iyo wiricheya inorema. Chiremba wako anogona zvakare kukupa mamwe mazano pane izvi, asi iyo yekupedzisira sarudzo ndeyako uye unofanirwa kusarudza kuti ndeipi yaunonzwa kugadzikana mairi.
Lightweight mavhiripu akareruka uye ari nyore kufambisa. Kana a isina kurema wheelchair hazvienderane nezvido zvako, kune zvekare magetsi emagetsi anofambiswa nemagetsi uye kune mimwe mitambo mavhiripu.
Unhu Hupi Unoda iwe?
Chinhu chechitatu chaunoda kufunga nezvacho ndezvipi zvinhu zvaungade kuve nazvo pane yako wiricheya. Ndezvipi zvinhu zvaunoda pane ako ezuva nezuva zviitwa? Iwe ungangoda kufunga nezve maficha akaita semubati wemukombe, bhegi, mubati wedemo nezvimwe. Aya maficha anoitirwa kugadzira yako wiricheya shandisa zvakanyanya kugadzikana, saka ipa izvi kufunga chaiko.
Iko kumberi kufunga kuri kutsvaga kumwe kwekutenga yako wiricheya, chingave chitoro chemuno chekurapa kana online. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zve mavhiripu nhasi, kunyanya yerudzi rweinjini. Funga nezve mashandiro uye kugona kwechigaro.
Kuenda nemhando dzinotungamira kunogona kunge kuri sarudzo iri nani, mabhureki akaita seDrive Medical, Teftec Mobility, Kukoka, Kudada Mobility, Sunrise Medical kutaura mashoma.
Aya matipi ari pamusoro anofanirwa kuuya anobatsira pakutenga yako nyowani wiricheya. Ipfungwa zvakare yakanaka kwazvo kutarisa kuwongororo dzevanhu vakatotenga mamodheru auri kufunga nezvawo. Mhinduro kubva kuvashandisi chaivo inogona kubatsira uye ichakubatsira iwe kudzikisira yako yekupedzisira sarudzo.